मात्र यसरी बनाएको पानीले २४ घण्टामै निकाल्दिन्छ कलेजोको सबै फोहोर…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस । – yuwa Awaj
मात्र यसरी बनाएको पानीले २४ घण्टामै निकाल्दिन्छ कलेजोको सबै फोहोर…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस ।
मंग्सिर १, २०७७ सोमबार 2
काठमाडौँ : सबै खालका बिराम चैट गर्नुछ । आज हामीलाई ध्यान दिनुहोस् । तपाईका लागि यो सामाग्री बहुउपयोगी हुन सक्छ । हामी सबैलाई थाहा छ की मानव शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउनको लागि, शुद्ध रगत हाम्रो शरीरमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।
नोट: माथि उल्लेखित स्वा’स्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारिरिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ । सम्पुर्णरुपमा यहि कुरामा मात्रै भर नपर्नुहोला । माथि उल्लेखित कुराहरु प्रयोग गर्दा तपाईको स्वा’स्थ्यमा थप खराबी देखिए, कृपया तुरुन्त रोकेर स्वा’स्थ्यकर्मीहरुसँग सल्लाह लिनुहोस् ।
Prevकिसमिस खानुको अचम्मैको ६ फाइदाहरु हेर्नुहोस ! सेयर पनि गर्नुहोस् ।
Nextनेपाल र गौतमसँग ओलीको छलफल – प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता गराउन आग्रह, साक्षी महासचिव !
एचएच ग्रुप युएईको तर्फ बाट सियोन नानुको लागि १०२९८०/- रुपैँया सयोग आर्थिक सहयोग…हेर्नुहोस् ।
बिचौलियाको कब्जामा मेगा बैंक, हिरा’सतमा रहेका ग्राहकको हस्ताक्षरमा करोडौं साफ…हेर्नुहोस् ।
मेयर शाक्य भन्नुहुन्छ : काठमाडौंलाई मागीखाने शहरको रुपमा चिनाउने काम नगरौं…हेर्नुहोस् ।
नेता बाँस्कोटा भन्नुहुन्छ : देशलाई संघीयता खाँचो नै थिएन, द्व’न्द्व व्यवस्थापनको लागि मान्दिनु परेको हो…हेर्नुहोस् ।